Global Voices teny Malagasy » Koety: Mpiondana Aterineto Telo Nosaziana An-tranomaizina · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 11 Jona 2012 3:44 GMT 1	 · Mpanoratra Mona Kareem Nandika avylavitra
Sokajy: Koety, Fisamborana sy faneriterena, Mediam-bahoaka, GV Mpisolovava
Hatramin'ny niparitahan'ny Lohataona Arabo dia narahan'ireo manampahefana Koetiana akaiky tokoa ireo mpampiasa aterineto ary antsoiny hanaovana fakàna ambavany sy matetika alefan-dry zareo eny amin'ny fitsarana noho ny fanenjehana azy aminà raharaha samihafa  izay ny betsaka dia manana endrika ara-pinoana na politika.
Ny tranga voalohany dia ny an'i Lawrence Al-Rishidi tany amin'ny voalohandohan'ny taona lasa tany ary nosarontsaronana taorian'ny baiko avy amin'ny polisim-panjakana. Ity farany izay sahala amin'ny manao tsindry amin'ireo media ao an-toerana mba tsy hiresaka ny tranga mahazo an'i Al-Rishidi ary efa ho herintaona sy tapany aty aoriana dia mbola any am-ponja ihany miandry ny fitsaràna azy, Al-Rishidi dia nohelohina folo taona an-tranomaizina noho ny faniratsirana ny mpitantana ny firenena, fihetsika iray helohin'ny lalampanorenana. Ny fitsarana ambony ao Koety dia nandray ny fanapahany niainga avy amin'io fiampangana io sy fiampangana hafa ihany koa toy ny hoe ireo lahatsarin'i Al-Rishidi ao amin'ny YouTube (izay nanjavona taorian'ny nisamborana azy), lahatsary izay niaty fanakianana ny rafitra misy eo amin'ny firenena, ny lalampanorenana, ary ny lalàna. Hitany ho tafiditry ny kolikoly ny lalampanorenana, ary ny lalàna tsy manaraka ny fitsipika ara-môraly, ka dia niantso ireo foko hifidy olona hitantana ny firenena aorian'ny fanesorana ny mpitondra izy. Noho io, nosaziana henjana tokoa i Al-Rishidi noho ny fanohintohinana ny filaminam-pirenena.
Ny sarin'i Al-Naqi eo ambanin'ny sary iray avy amin'ny hetsika iray mangataka ny hamonoana azy
Ny mpiondana aterineto iray hafa voaheloka hifonja no tena manana ny tranga faran'izay malaza indrindra hatreto. Hamad Al-Naqi dia lehilahy vao herotrerony, Shiita avy ao Koety izay nosamborina noho ny faniratsirana ny mpaminany Mohammed, ny vadiny, sy ny mpiaraka aminy ary noho ny faniratsiràna ireo mpifehy ao Bahrain sy Arabia Saodita. Ny didy famonjàna dia folo taona avy amin'ny fitsarana heloka bevava ary mbola hoentina eo anatrehan'ny fitsarana mpandrava didy. Ny nampahalaza ny raharahan'i Hamad dia noho ny fisian'ireo mponin'ny aterineto marobe sy mpikambana ao amin'ny parlemanta nangataka ny hamonoana azy ho fampiharana ny lalàna islamika na teo aza ny filazàny hoe nisy nijirika ny kaontiny. Nandany lalàna iray hamonoana na iza na iza maniratsira an'Andriamanitra, ny Silamo, ny mpaminany, ireo manodidina azy, ary ny vadiny ny Parlemanta. Tany am-ponja, Hamad koa dia niharan'ny tsindron'antsy nataonà Koetiana iray izay voafonja noho ny asa fampihorohoroana. Ny lalàna momba ny fitenenan-dratsy an'Andriamanitra dia nobahanan'ny Emir izy tenany mihitsy, izay nanakana ihany koa ny ezaky ny parlemanta hampanjary ho Islamika ireo lalàna rehetra eo amin'ny firenena. Ny Emir dia niteny fa ny lalàna momba ny faniratsirana an'Andriamanitra dia tsy mandray ho ao anaty kajiny ny fahasamihafàna ara-pivavahana ary mifanohitra amin'ny Lalampanorenana.
Ilay mpandefa bitsika, Nasser Al-Ansary
Ny raharaha farany indrindra dia ny an'i Nasser Al-Ansary, iray hafa mpandefa bitsika (@Nas10000 ) nosaziana dimy taona an-tranomaizina noho ny faniratsiràna ny Emir. Ny fitsarana heloka bevava dia nandray ny fanapahany tamin'ny filazàna fa i Al-Ansary dia naniratsira ireo mpifehy ny firenena tamin'ireo bitsika nalefany. Tsy mbola misy fantatra hatreto ny votoatin'ireo bitsika ireo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/06/11/34121/
 raharaha samihafa: https://advocacy.globalvoicesonline.org/2011/09/28/kuwait-three-netizens-detained/